musha United Kingdom Fomura Imwe Dhiraivha George Russell Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu George Russell Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Steve naAlison Russell), Mhuri, Hukama (Carmen Montero naSeychelle de Vries).
Moreso, Hupenyu hwemumhanyi, Vanun'una (Cara naBenjy), Muhoro, mambure akakosha uye Mararamiro.
Kuita muchidimbu nyaya, tinokupa mufananidzo wakazara weNhoroondo yeHupenyu hwaGeorge Russell, mutyairi wemujaho wekuBritain anokwikwidza muFormula One.
Yedu Biography inotanga kubva paucheche kusvika ave zita reimba mumutambo wekarting.
Kuti tifadze shuviro yako yeBiography yedu, isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaGeorge Russell. Pasina mubvunzo, mapikicha aunoona pazasi anopfupisa nhoroondo yehupenyu hwake.
George Russell Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche kusvika pakubudirira kwake.
Ehe, isu tinomuziva nekuda kwekuita kwake kukuru uye nekumhanya kunoshamisa. Kutyaira kwake nekukurumidza kwakonzera kuti vazhinji vamutore semukwikwidzi wepasirese weramangwana.
Pasinei nekuzivikanwa kwake, tinoona kuti vashoma chete ndivo vakaverenga chikamu chipfupi cheBiography yaGeorge Russell.
Naizvozvo, isu takafungidzira kuti zvakakodzera kuti tikushandirei iyo inonakidza nyaya yaGeorge Russell uye nekuputsika kwechiitiko chake chemitambo kusvika ikozvino. Zvino, pasina kunonoka, ngatitangei.
George Russell Childhood nyaya:
Kutanga, George William Russell akaberekwa pazuva regumi neshanu raFebruary 15 kuna amai vake, Alison Russell uye baba, Steve Russell.
Mbiri yedu yeBritish yakazvarirwa mutaundi rechiteshi chengarava uye remusika rinozivikanwa seKing's Lynn muNorfolk, England.
Akazvarwa ari mudiki pakati pevakoma vake vaviri (Cara naBenjy) nekubatana kwevabereki vake (Steve naAlison Russell), vane mifananidzo yatakatora pazasi.
Tarira vabereki vaGeorge Russell - amai vake, Alison Russell nababa, Steve Russell.
YeChirungu mota racer akakurira muWisbech, Cambridgeshire. Aive nemakore manomwe paakatanga kuita karting. Kutanga kwekutanga kwekutyaira Sport kwaive kwakakosha kubva kuna mukoma wake mukuru, Benjy.
George Russell akashandisa yakawanda yenguva yake yehudiki kutenderedza karting tracks uye Benjy Russell, uyo akapindawo mukukwikwidza karting. Semwana wekupedzisira wemba, akaona hupenyu kunge mubhedha wemaruva.
Mufananidzo wehucheche waGeorge Russell.
Nekudaro, vachipinda mumotorsports, vazhinji vakamudzidzisa neimwe nzira. George Russell, nekushanda nesimba, akabuda akanaka kwazvo pamutambo uyu.
Baba vake, Steve, aive Mechanic pakutanga. Vaishandisa kuseri senzvimbo yekugadzirisa mota. Nekudaro, sezvaakakura achiona mukoma wake achirova karting, zvakasununguka zvakawedzera kufarira kwake karting.
George Russell Yemhuri kumashure:
Vatyairi vemujaho havafanirwe kubva kumamirioni-mamirionea kana mabhirioni emhuri. Nekudaro, chokwadi chiripo ndechekuti haugone kuve murombo uye kupinda mune motorsports. Huwandu hwakanaka hwemari buoyancy hunodiwa.
Baba vaGeorge Russell, Steve, semuridzi webhizinesi diki, aive akaenzana nebasa racho. Vakanga vaine zvakakwana kuti vatarisire zvakakosha mumba.
George Russell Mhuri Kubva:
Achitaura nezve mhuri yake, George Russell akabata nyika yeBritish. Akazvarirwa mudunhu muEast Anglia kuEngland, inozivikanwa seNorfolk.
Inoyambuka Lincolnshire kuchamhembe kwakadziva kumadokero, Cambridgeshire kumadokero nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, uye Suffolk kumaodzanyemba.
Saizvozvowo, baba vake vari zvakare vanobva kuBritish. Saka nekureva, tinogona kuti mutambi wacho muBritish uye anobva kuNorfolk. Pazasi pane kuratidzwa kwemifananidzo yemhuri yaGeorge Russell.
Chiratidziro chemhuri yaGeorge Russell.
George Russell Ekutanga Basa:
Kufanana nevakawanda vaibudirira mujaho, basa raRussell remujaho rakatanga mumago-karts aine makore masere muna 2006. Akadzidza zvakanaka kubva kuna baba vake nemukoma wake Benjy.
Ivo saka vakabatsira George kuti akunde mukutanga kwake kwese kwemanera emota. Tarenda yake yaive pachena kuona kubva pazera chairo.
Russell akatsikira kuBritish Open Champion uye MSA yeBritish Cadet Champion, achizviita kuti azivikanwe nenyika yeBritish Motor-racing mutambo. Na 2010, akatamira kuchikamu cheRotax Mini Max.
Mufananidzo waRussell, pakutanga kwekutanga kwebasa rake rekukamba.
Achiri muRotax mini, akave Formula Kart Stars British Champion, Super One British shasha ndokuzohwina Kartmasters British Grand Prix mumwaka une simba.
Russell akapedza kudzidza kuPremier Junior Karting kirasi (KF3) mwaka wakatevera.
Kuti apedze CV yake inobhadhara karting, akahwina zita reSKUSA Supernational ndokuve CIK-FIA European Junior Champion muna 2012 na2013.
Mugore rake rekupedzisira rekarting, Russell akapedza 19th muKF1 CIK-FIA World Championship. Pazasi pane clip yebvunzurudzo yakaitwa muna 2012.
George Russell Dzidzo:
Russell akawana chikamu chedzidzo yake pachikoro chakazvimirira chezuva paIsle of Ely, Cambridgeshire, England, inonzi Wisbech Grammar School.
Iyo institution iri pakati pezvikoro zvekare muEngland. Mudiki akatanga pa11 kusvika ave 18, asati aenda kuMilton Keynes kuti ave padhuze nemapoka ake emujaho.
Pikicha yekuona izvo zvakaita chikoro chaGeorge Russell.
George Russell Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Russell akawana rake-seater debut muna 2014 muRenault 2.0 Alps Championship uye nekupedza mwaka P4.
George akakwikwidzawo makwikwi maviri eEurocup Formula Renault 2.0 Championship. Akahwina chikamu chekupedzisira chemwaka semuenzi apinda.
Aizohwina mukombe weBRDC Formula 4 Championship muna 2014, uye muna Zvita wegore rimwe chetero, akazove mudiki-akambohwina mubairo wepamusoro weMcLaren Autosport BRDC Award.
Iyo accolade yakamupa iye angangoita $ 135,000 mari mubairo uye yeBritish Mujaho Vatyairi 'Kirabhu nhengo. Akawanawo bvunzo yeFormula One naMcLaren.
MunaFebruary 2015, Russell akaziviswa semumwe wevatyairi gumi nevaviri vakasarudzwa kujoina chirongwa cheBritish Mujaho Dhivha 'Club SuperStars. Akange ari zvakare mudiki pane vese akambogashirwa kuchirongwa.
Mushure memwaka miviri muFIA Formula 3 European Championship, George akakwira kuenda kuGP3, achihwina zita iri mumwaka wake wekutanga.
Kuhwina kwakauya asati aita zvakafanana zvakare gore rimwe gare gare mumwaka wake wekutanga F2.
Parizvino, George Russell akanakidzwa nenzira yakafanana neiyi Charles Leclerc - vese vakakunda mazita eGP3 neF2 kudzoka neshure.
Inobuda FIA Fomula 3 European Champion.
George Russell Biography- Kumuka Mukurumbira:
Russell aive GP3 Series Champion muna 2017. Akarova Lando Norris kupiwa mubairo nenzvimbo pane gridhi yeF1, uchinetseka nehembe dzaWilliams. George zvakare akave 2018 FIA Fomula 2 Mhare yeART.
Mushure mekukunda kwake kweFormula 2 mukwikwidzi, Russell akasainira Williams muna 2019. Akazotanga kuita rake rekutanga mu2019 Australia Grand Prix, pamwe naRobert Kubica, achipedza rechi19.
Mushure mekumira-kwechinzvimbo chaLewis Hamilton nekuda kweCovid-19, Russell akawana kondirakiti yekutyaira Williams kusvika mwaka wa2021.
Waanoshanda naye mutsva mutyairi weCanada Nicholas Latifi. Russell anove Briton wekutanga kuenda kuWilliams kubvira 2009 shasha yenyika.
Pakazosvika 2021, George Russell akapotsa abvisa kuvhunduka kukuru muFormula 1 nhoroondo. Pamusangano weBelgian Grand Prix unokodzera. Chiitiko ichi chakaratidza yekutanga-kumberi-mutsara kutanga kwaWilliams kubvira 2017 Italian Grand Prix.
Iyo 2021 Belgian Grand Prix:
Pamutemo inozivikanwa seFormula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021, Waive mujaho weFormula One mota. Mujaho wakanonoka nemamiriro ekunze akanyorova, uye ivo vakapedzisa pakupedzisira maviri chete marap, ese ari pasi pekuchengetedza mota mamiriro.
Mujaho uyu une rekodhi yekuve mujaho mupfupi weFormula One World Championship wakamboitwa.
Chiitiko ichi chakabvumira Russell kuchengetedza chigaro chake chegidhi uye kutora yake yekutanga Formula One podium kupera. Max Verstappen akahwina mujaho, kumberi kwaGeorge Russell.
George Russell achitora yake yekutanga Formula One podium kupera.
Ndiani George Russell Kufambidzana?:
Briton haana kuroora. Nekudaro, anga aine zviitiko zvishoma. George akambodanana naSeychelle De Vries, hanzvadzi yeFormula 2 mutambi pamwe naye Nick de Vries, mu2017.
Nehurombo, hukama hwakazosheedzwa mu2019. Achienda kumberi, Russell akatanga kufambidzana naCarmen Montero Mundt. Iye bhizinesi uye manejimendi mudzidzi.
Vaviri vacho vakaonekwa pekutanga paddock pa2020 Tuscan Grand Prix. Pakutanga kwa2021, takatamba George Russell naCarmen Montero muSt Barts kwezvaiita senge zororo. Pazasi pane kolaji yemufananidzo wavo.
Collage yaGeorge Russell nerudo rwehupenyu hwake, Carmen Montero Mundt.
George Russell Mhuri Chokwadi:
Pasina panikiro, mhuri yaGeorge Russell, zvikurukuru baba, Steve, yakaita rutivi runokosha mukubudirira kwaGeorge Russell.
Kuita kwevabereki vaGeorge Russell (Steve naAlison Russell) hakugoni kusimbiswa zvakanyanya.
Vaigara vachitsigira uye vakaita zvese zvavaigona kuti vaone kuti Mwanakomana ane tarenda, George, abudirira.
Pamusoro pazvo zvose, pfungwa yake yokushanda nesimba inofanira kuva yakabva pakuzvipira kwenhengo dzeimba yake. Zvino, ngatitarisei zvakakwana nhengo imwe neimwe yeimba yayo.
Mufananidzo wemhuri wevaRussell.
Nezve George Russell Baba - Steve:
Zvakare werudzi rweBritain, baba vaGeorge, Steve Russell, anoda Sports. Iye anofarira Wolverhampton Wanderers FC. Kuda kwake mutambo wemujaho; akapa kuvanakomana vake vaviri, Benjay naGeorge.
Baba vaRussell, Steve, vane bhizimisi duku. Akashandisa mari yacho kusvika parizvino kutsigira vana vake mukarting.
Nekudaro, George akawana rutsigiro rwakakura kubva kuMercedes. Steve akadzidza zvidzidzo zvake achitungamirira mwanakomana wake mukuru, Benjy.
George Russell, nababa vake, Steve.
Naizvozvo, akavandudza naGeorge. Zvakaitika naBenjay zvakamubatsira kuisa George munzira kubva pakutanga.
Uyezve, yaive nguva yekufara panhau dzekutorwa kwemwanakomana wake neFormula One.
Baba vaGeorge, Steve Russell, vaichema misodzi. Akave akamirira nguva yake kwemakore makumi maviri apfuura. Iye zvino anogona kutarisa mwanakomana wake achipinda mune imwe yeInternational yepamusoro-kirasi auto racing.
Nezve Vabereki vaGeorge Russell - Amai:
Steve Russell akaroora Alison Russell kweanopfuura makumi matatu emakore ikozvino. Ivo vaviri vane vana vatatu pamwechete, George ariye wekupedzisira. Amai vaGeorge, Alison Russell, anga ari mudzimai anotsigira uye amai.
Aichengeta imba, achionawo zvizhinji zvezvinodikanwa zvemirangariro zvaGeorge Russell. Alison anogara aripo munzira, achienda kumakwikwi emwanakomana wake uye achimutsigira kubva pamazuva ake ekutanga kukamba.
Akachengeta hupenyu hwake hweveruzhinji hwakavanzika kwazvo. Alison anochengetedza hupenyu hwake hwepachivande kure nenzvimbo dzekutandarira.
George Russell, pamwe naamai vake, Alison.
Nezve George Russell Siblings - Hama:
Benjy Russell anga ari muenzaniso weGeorge. Ndiye dangwe mwanakomana wevabereki vavo uye akambobatanidzwa mukukwikwidza karting. Benjy naGeorge vakapedza nguva yemhando pamwe chete vakatenderedza mateki e karting sevacheche.
Sezvineiwo, Helmet yekutanga yaGeorge yaive ruoko-me-pasi kubva kuna mukoma wake. Tinogona kuti ivo vaviri vanogovana hukama hwakasimba.
George nemukoma wake, Benjay.
Nezve George Russell Siblings - Hanzvadzi:
Pakati pekuzvarwa kwaGeorge nemukoma wake mukuru, Benjy ihanzvadzi yake, Cara. Sezvineiwo, hanzvadzi yake Cara haana kuzvipa mumotorsports.
Iye anofarira zvemotorsport uye apedza makore makumi maviri apfuura ari mumakwikwi emujaho muEurope yose achifadza vakoma vake.
Kunyange asina kumbobvira amhanya, iye Operations Maneja paW akateedzana ezvese-vakadzi mujaho mujaho muna 2019.
Anogara achitsigira munun'una wake sezvaanogara achikwikwidza mumitambo yemijaho yemotokari, achiratidza rutsigiro rwake kuburikidza nesocial media.
Sekureva kwemishumo, Cara, pamwe naamai vavo Alison, vakashungurudzwa nemabatiro avakaita Lewis Hamilton.
Mufananidzo wehanzvadzi yaGeorge, Cara (kuruboshwe) naamai vavo, Alison (kurudyi).
Nezvehama dzaGeorge Russell:
Mutyairi wekuBritain anomhanya anofanira kunge aine dzimwe hama. George T. Kunyangwe ipapo, isu hatisati tanzwisisa chero chinhu nezvavo.
Nguva yekutamba nemuzukuru wake uye muzukuru.
Hupenyu Hwega hwaGeorge Russell:
Sababa vake, George Russell anofarira kutamba nhabvu. Saka, iye zvakare fan weWolverhampton Wanderers Football Club.
Uye zvakare, iyo Briton Champ inoda Cycling, Kumba Workout kunyanya kumhanya, Gorofu, Mujaho, Vhidhiyo mitambo uye kushanya kuzororo.
Moreso, anofarira kutandara neshamwari, Skating uye kukwira makomo. Zvakare, George Russell anotora mukana wezvemagariro venhau kuvhara iro gaka pamwe nevateveri vake vaigara vachitsigira.
Yake Instagram account yega ine vanopfuura mamirioni maviri vateveri. Anogovana mifananidzo kubva kumatepeti emutambo wake wemujaho, kudzidziswa uye mitsva inouya. Nzira yake yaanofarira iSarno Italy.
Russell panguva yake yekuzorora.
George Russell Mararamiro:
Kunyangwe hazvo Russell achiwira muchikamu chevatambi vemitambo vane mukurumbira, shasha iyi haazvitore senyeredzi hofori.
Akave nemwaka wakanaka wekutanga F1, uye kunyangwe asina kunwisa chero poindi, akakunda waaishanda naye, Robert Kubica, maererano nekuita.
Mararamiro eumbozha evatyairi veF1 anowanzo sanganisira majeti ega, madhiri enyeredzi shanu, dzimba dzeumbozha uye mota dzinomhanya.
Zvisinei, mujaho waWilliams Russell anorarama upenyu hwomutambarakede uye huri nyore. Pasinei nekureruka, tinoratidza rudo rwake rwemotokari dzinokurumidza mumifananidzo iri pasi apa.
Collage yemashoma emota dzaGeorge Russell.
George Russell Muhoro uye Net Worth:
Semumwe wevatyairi vashoma vegridhi, Russell zvisingaite anowana mari shoma kune vazhinji veaanoshanda navo. Kunyange zvakadaro, Briton anonzi anounza madhora anosvika mamirioni 1.2 pagore, sekureva kwegore ra2020 reBusiness Book GP.
Mari yake inokonzeresa chibvumirano chemakore akawanda chaakasaina naWilliams muna 2019, icho chega chakakosha madhora mazana matatu nemakumi mashanu pamwaka.
Mari yacho ingadai yakadzikira kunyangwe akatora mubhadharo we20% nekuda kwekuvhunduka kwedenda ra2020 pachikwata.
George ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora miriyoni imwe, maererano nenzvimbo dzinozivikanwa. Izvo parizvino zvakaenzana kutenderedza £ 1.
George Russell Anobvumira:
Kunze kwemubhadharo wake wepasi, Russell anowanawo mari yakati wandei kubva kune zvaakatsigira zvakasiyana uye nerutsigiro. Russell anobata neMercedes, Bell Helmet, AMG, BRDC, Alpinestars, uye Puma.
George Russell Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane zvishoma zvinoyemurika chokwadi chingafadza fancy yako.
Chokwadi #1: Pamusoro peHelmet yaGeorge Russell:
Dhizaini yengowani yaRussell yakaramba isina kuchinjwa panguva yake muF1.
Nepo patani yacho yakafanana, mavara aigara achichinja pakati pe dzvuku neblue rondedzero uye tsvuku ine dema rondedzero. Russell akatambawo dhizaini imwe chete yerudo munguva yake yese naWilliam.
Mufananidzo weakasiyana ngowani.
Chokwadi # 2: Kugadzwa:
Muna Kurume 2021, Russell akagamuchira musangano semutungamiriri weGrand Prix Drivers 'Association, achitsiva Romain Grosjean, uyo akasiya chigaro mushure mekubva kuFormula One kuenda kuIndyCar.
Chokwadi # 3: Chibayiro chaRussell paSakhir Grand Prix:
Mukwikwidzi wenguva nomwe-wepasi rose Lewis Hamilton akatongwa nemuedzo wakanaka weCOVID-19 paSakhir Grand Prix. George akasarudzwa kutsiva iye.
Somuuyo, Russell akawana chigaro chakakodzera kuti ajaire imba yevatyairi asi akawana kuti yakanga yakamanikana kupfuura mhoteredzo yaaiziva kuWilliams.
Russell akareba masendimita mana kupfuura Hamilton, achigadzirira kugadzikana paakapinda mumotokari kekutanga.
Kudzora izvi, Russell akapfeka bhutsu diki dzemujaho kuti akwane mumotokari yeMercedes F1. Akashandisa saizi gumi bhutsu dzemujaho pachinzvimbo cheakajaira saizi 11s.
Hamilton anowanzo mhanya aine saizi mapfumbamwe mabhutsu. Kunyange zvishoma kusagadzikana. Akatsungirira marwadzo kuti awane mukana wake.
George Russell Biography Pfupiso:
Zvishoma nezvishoma, kana iwe usingakwanise kupfuura zvese zviri pamusoro, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveWilliam's Racer.
Zita rizere: George William Russell
Zuva rekuzvarwa: 15th Zuva raFebruary 1998
Nzvimbo yekuzvarirwa: King's Lynn, Norfolk, England
Dzidzo: Wisbech Grammar Chikoro
Baba: Steve Russell
Amai: Alison Russell
Vanun'una: Benjy Russell (Hama), Cara Russell (Hanzvadzi)
Musikana: Carmen Montero Mundt
Hobbies: Kuchovha bhora, nhabvu, Kumba kurovedza muviri kunyanya kumhanya,
Gorofu, Mujaho Vhidhiyo mitambo uye kufamba kwezororo.
Net Worth: $ Miriyoni 1 (2020)
Muhoro: $ Miriyoni 1.2 (2020)
Mukuvhara iro Biography yaGeorge Russell uye Hupenyu Hwevacheche Nyaya, tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Kunyangwe pazera diki raGeorge Russell, aine ruzivo rushoma achienzaniswa nevamwe vatyairi veF1, akazviitira zvakanaka.
Kutarisa kwake, kutsunga, uye basa rakaomarara zvave zvinobatsira. Zvakanaka, nekuda kwerutsigiro ruzere kubva kuna Baba vake, Steve nemukoma, Benjy. George aigona kudzidza pasina nguva izvo zvaizotora vamwe kwenguva yakareba. Nhasi George Russell murwi wechi145 weBritish kutyaira muFormula One.
Tinotenda kuti iwe unowana ichi chinyorwa-chinofadza chinofadza, uye chinonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.